Isbedelada cusub ee Purificación García xagaaga | Bezzia
Isbedelada cusub ee ka socda Purificación García xagaaga
Maria vazquez | 29/04/2021 18:00 | Maxaan xirtaa
Bartamihii jiilaalka waxaan ogaanay muuqaal yar oo kan hadda socda ah ururinta Purificación García. Ururinta SS21 oo aad u ballaadhan kana mid ah kuwa ay qormooyinkeedu ku cusub yihiin ayaannu ka helaynaa saddex isbeddel oo cusub oo shirkadda ku saabsan Ma qiyaasi kartaa waxa ay ka yihiin uun sawirada daboolka?
Malaha waad qiyaastay. Midka hore wuxuu leeyahay midab sida jilaayaasheeda ah; gaar ahaan, midab liin qoto dheer leh. Kuwa soo haray waxay tixraacayaan laba nooc oo daabacan: daabacaadda xariijimaha ah iyo daabacaadda botanical ama floral. Saddex isbeddel oo, si kastaba ha noqotee, aysan ahayn kuwa kaliya ee ka mid ah ururinta cusub ee shirkadda Isbaanishka.
3 Daabacaadda ubaxa
Waa wax lala yaabo in la helo liinta ka muuqaneysa uruurinta 'Purificación García'. Waxaan ka helnaa qaybo leh daabacaad farshaxan ah sida dharka midi gacmo-galka ah ee gacmo-la’aanta ah iyo shaarka dhaadheer ee qulqulaya oo leh dheello, jeebado waaweyn oo dheeri ah iyo jeexitaan dhinac ah. Laakiin sidoo kale dharka caadiga ah sida jaakad aan nidaamsanayn oo leh xariiq xad dhaaf ah oo feeraha ah ama jaakad maqaar faux ah. Dharka ay shirkaddu ka laba-labayn weydo inay la midowdo kuwa kale ee caddaanka ah.
Xaglo toosan iyo toosan, karbaash dhuuban iyo qaro weyn ... Noocyo kala duwan oo karbaashyo ah ayaa ka dhex muuqda sheekooyinka cusub ee Purificación García. Dhammaan, si kastaba ha ahaatee, waxay wadaagaan hal sifo oo guud, Waxaa lagu soo bandhigaa madow iyo caddaan. Daabacadan, waxaad kuheli doontaa dhar jilicsan, surwaal toosan iyo jaakado laba jibbaaran oo cudbi malab ku sameysan ah. In kasta oo ay u badan tahay, waxay noqon doontaa midabka midabka dillaacsan iyo jaakadda suufka leh xariijimo jiif ah oo soo jiidan doona dareenkaaga inta ugu badan.
Marka hore cilmiga dhirta, dhalaalka iyo midabbada badan. Ubaxa labaad ee madow iyo cadaan leh midabyo huruud ah. Miyaad horeba u haysatay kan aad ugu jeceshahay? Koodhka buufinka jeexan ee buufin leh naylo feer leh oo leh qoorta wareegsan iyo dharka midi ee crepe grained leh gacmo gaaban oo buunbuunis ah iyo goonnada goynta buufinku waa qaybaha aannu ugu jecel nahay oo leh daabacaadda dhirta.
Kuwa ka mid ah madow iyo caddaan ubax daabacan Waxaan si gaar ah u garaacnay dharka toosan ee toosan iyo surwaalka, labadaba waxaan ku leenahay faahfaahinta tuubbooyinka ka duwan. In kasta oo aanan doonaynin inaan joojino sheegashada jaakadda bambo-gacmeedka maxaa yeelay waxay noqon kartaa saaxiib weyn si loo dhammaystiro dharka aad u kala duwan xagaaga.
Ma jeceshahay soo jeedinta Purificación García xagaaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Isbedelada cusub ee ka socda Purificación García xagaaga
Sida looga saaro burooyinka